टिकटक र इन्टाग्राममा भाइरल भएकी यी युवती को हुन् ? – ताजा समाचार
टिकटक र इन्टाग्राममा भाइरल भएकी यी युवती को हुन् ?
बलिउड तथा टीभी इन्डस्ट्रीमा केही यस्ता कलाकार छन् जो अभिनयका कारण मात्रै नभई ट्यालेन्टले पनि चर्चामा छन् । यस सूचीमा अभिनेत्री अवनीत कौर पनि छिन् ।
उनलाई मानिसहरूले अभिनयका कारण मात्रै नभई डान्स, यूट्युब भिडियो, टिकटक तथा इन्टाग्रामका कारण चिनेका छन् । उनी इन्टाग्राममा निकै सक्रिय रहने गर्छिन् र हट फोटोहरू अपलोड समेत गर्ने गर्छिन् र त्यसबाट निकै चर्चा पाएकी छिन् ।
अवनीतले डान्स शोबाट आफ्नो करिअरको शुरूआत गरेकी थिइन् । त्यसपछि उनी टीभी सिरियलमा व्यस्त हुन थालिन् । सिरियल हुँदै उनी फिल्ममा समेत काम गर्न थालिन् । उनले रानी मुखर्जीको फिल्म ‘मर्दानी २’ मा समेत अभिनय गर्ने मौका पाइन् । फिल्ममा निभाएको भूमिकाले उनलाई थप चर्चा दियो ।
यसअघि उनी ‘डान्स इन्डिया डान्स लिटिल मास्टर्स’ र ‘डान्स के सुपरस्टार’ मा देखिएकी थिइन् । डान्समार्फत प्रशस्तै फ्यान कमाएकी उनी कोरियोग्राफर समेत भइन् । उनी फिल्म ‘तारे जमीं पर’ फेम एक्टर दर्शील सफारीको कोरियोग्राफर समेत बनेकी थिइन् ।
अहिले अवनीत ‘अलादीन: नाम तो सुना ही होगा’मा काम गरिरहेकी छन् । यसअघि उनले टीभी सिरियल ‘मेरी मां’, ‘टेढ़े हैं पर तेरे प्यार में’, ‘सावित्री’, ‘एक मुट्ठी आसमान’, ‘हमारी सिस्टर दीदी’ तथा ‘चंद्रनंदिनी’जस्तामा अभिनय गरेकी थिइन् ।
उनी यूट्युब र टिकटकमा आफ्नो भिडियोहरू शेयर गर्ने गर्छिन् ।